Ny fiheverana ny sainan'i Wingyi
Sambany vao niseho ny tandindon'ny ekipa Wingji tao Ejipta fahiny tao amin'ny tempolin'i Set Set. Ity fitaovana ity dia toy izao: nisy peratra volamena nihantona teo amin'ny tady lava lava teo ambonin'ny latabatra boribory lehibe, teo amin'ny sehatr'ireo hieroglyphs sy sary famantarana mahagaga.
Ny birao maoderina dia niseho tamin'ny 1889. Na dia tsy nisy dokam-barotra lehibe aza, dia nitaky fitakiana goavana ny birao, satria te hifandray amin'ny olona izay tsy anisan'ny velona intsony ny rehetra.
Inona no itiavan'ny magy Wingji?
Ny birao dia tsy afaka hividy afa-tsy ihany, fa natao ihany koa. Satria ny fitaovana dia mampiasa taratasy, hazo, vato, metaly. Ao amin'ny birao dia voasoratra avokoa ny litera amin'ny alfabeta, tarehimarika ary teny 3: "eny", "tsia", "fialan-tsasatra". Afaka mampiasa fitaovana samihafa koa ianao amin'ny maha mpanondro anao. Ao amin'ny safidim-pividianana, ohatra, misy zana-tsipìka manokana, ary afaka mampiasa saka, fanjaitra, fitaratra ary zavatra hafa. Afaka mahazo ny biraon'i Wingji ny olona rehetra.
Mampiasa sehatra fitarihana fivoriana ara-panahy izy ireo . Manampy ny mahafantatra ilay valin'ny fanontaniana napetraky ny fanahy. Ny zana-tsipìka eo ambany fiantraikan'ny hery hafa tontosaina dia manomboka mandroso ary manondro taratasy voafaritra tsara, izay mamaritra ny teny.
Raiso ny solaitrabe, apetraho eo ambonin'ny latabatra ary hazavana maromaro maromaro. Zava-dehibe ny tsy hanelingelina anao mandritra ny fomban-drazana , mba tsy hampitsaharana fifandraisana. Andao hiditra mivantana amin'ny tombony momba ny Wyndzhi Witch Board. Tendreo ny tadin-doha amin'ny tanana roa amin'ny mpanondro, mifantoha ary miantso ny fanahy. Mety misy olona, ​​havana maty, tarehimarika manan-tantara, sns ... Mba hamerenana izany dia averimbereno foana ny hoe: "toy izany ny fanahy, avia!". Raha vao mahatsapa ny fisian'ny hery hafa rehetra ianao ary mahita ny hetsika ataon'ilay mpanondro, azonao antoka tsara ny lafiny ara-panahy. Alohan'ny hangatahana fanontaniana dia anontanio izy raha vonona hiara-miasa aminao izy. Rehefa mahazo valiny tsara ianao dia afaka manomboka mametraka fanontaniana. Andramo aloha ny azonao valiana na "eny" na "tsia".
Fialan-tsasatra amin'ny sarintany mahazatra
Ny fanaovana diavin'ny alin'ny Taom-baovao - ny karazam-panafahana azo antoka indrindra
Famintinana karatra tarot
Marika eo amin'ny felatananao ankavanana
Otitis amin'ny zaza - soritr'aretina sy fitsaboana ilay aretina
Seafood ao anaty saosy mamy
Fanabeazana sy fisainana
Inona no vitamina ao anaty aty?
Inona no atao hoe server ary inona no tsy mampitovy azy amin'ny ordinatera na fampiantranoana?
Myopia amin'ny faharetana
Manana Charlie Sheen sy Lindsay Lohan ... fifandraisana manokana?
Horseshoe vita amin'ny farafara sira
Hetsi-panahy mody 2013
Trano any Skandinavie
Iza no homôbôbika - inona no dikan'ny fankahalàna ny homophobie, ny anton'izany, ny fomba fiadiana sy ny fanesorana?
Kabary tsara tarehy
Tonga tao an-trano ilay saka - famantarana
Akanjo fotsy mainty
Lamaody an-dalamben'i Moskoa
Ny mason'ny alika dia mihasimba